LAHORE (Reuters) - Fast Bowler Lahiru Kumara uye spinner Lasith Embuldeniya vakatora wicket ina imwechete kuti ibatsire Sri Lanka kuunganidza mauto ePakistan kwe191 mune yekutanga innings pazuva rekuvhura yechipiri neyekupedzisira bvunzo kuKarachi neChina.
Asad Shafiq naBabar Azam vakarova makumi mashanu nemumwe akavhurika Abid Ali, uyo akaita makumi matatu nemasere, mumwe chete mabhogi wemauto kuti asvike maviri manhamba mushure mekunge kaputeni Azhar Ali akunda mutambi uye akasarudza kutanga.
Mukupindura, Sri Lanka yakasvika makumi matanhatu nevatatu mune yavo yekutanga innings pakupera kwemutambo wezuva nevanokurumidza kuPakistan vanokuta huta vachiita kukuvara kose.
Oshada Fernando ndiye akatanga kudzika kuPakistan mudiki Shaheen Afridi kwemana uku kaputeni Dimuth Karunaratne anga achienda makumi maviri neshanu, zvichikwevera Mohammad Abbas pamapfumo ake.
Abbas akadzingawo Kusal Mendis kwegumi nematatu, achisiya aimbova skipper Angelo Mathews, asina kurohwa pamasere, uye husiku murume wekusimudza Embuldeniya kuti atore Sri Lanka kunhuwa.
Pakutanga, muvhiiri weruoko rwekuruboshwe Vishwa Fernando akapa Sri Lanka kutanga inoshamisa nekutumira anovhura Pakistan Pakistan Shan Masood naAzhar, uyo asina kana makumi mashanu kubva pamakumi gumi nematanhatu akatarisana neNew Zealand muna Zvita, 2018, munzvimbo yekuburitswa katatu.
Azam, iyo yaita makumi matanhatu, ikawedzera makumi mashanu neshanu neAdid wiketi yechitatu uye imwe makumi matanhatu neimwe yechina naShafiq kuti isimbise dzimba dzePakistan.
Kuruboshwe-ruoko spinner Embuldeniya, uyo akauya kudivi rekukuvara nekukurumidza kukurumidza, Kasun Rajitha, akaita kuti Babar aburuke uye atore mabhegi aHarish Sohail nevanoseka Mohammad Abbas naShaheen Afridi kuputira iwo maoffings.
Kumara akagwadama pamhanyisa nguva yezuva rose uye akadzinga Mohammad Rizwan uye Yasir Shah mukuteedzana kunowedzerawo kune wigi yeAbid.
Shafiq akawira pasi akapfava paakasimudzira Kumara pagumbo rakanaka kuti awire makumi matanhatu nemasere, zvichizadzisa tarisiro yekuPakistan yekutumira chikoro chinopfuura mazana maviri.
Mativi ese ari maviri akamanikidzwa mune shanduko mu Bowling department nekuda kwekukuvara uye kurwara.
Pakistan yakawedzera ane ruzivo gumbo-spinner Yasir Shah yekukurumidza kukurumidza bowman Usman Shinwari, uyo ari pasi nefivha, uku Sri Lanka ichibatanidza Embuldeniya padivi.
Iyi nhabvu yemitambo miviri, chikamu cheWorld Test Championship, inoratidza kuedzwa kwekutanga kwePakistan paivhu repamba kubvira kurwiswa kwevarwi muna2009 bhazi rechikwata cheSri Lanka muLahore.
Bvunzo yekuvhura kwemamiriro ekunze kuRawalpindi yakapera mudhirowa.